Dagaalada Deefow ee Gobolka Hiiraan Waa Laga Gaabiyay - Wargeyska Faafiye
Dagaalada Deefow ee Gobolka Hiiraan Waa Laga Gaabiyay
Deegaanada Deefow iyo kabaxanley oo dhow magaalada Belet Weeyne oo ah meelaha ay ku soo noq noqdeen dagaalada u dhexeeyay dhalinyaro deegaanka ah iyo maleeshiyaad la sheegay in Abaabulkooda ay ka dambeeyaan Maamulka dowlada ee gobolkaa hiiraan,
Ayaa waxaa dowlada lagu eedeeyay in ay ka gaabisay xakameynta dagaalada ka dhacaya deegaanadaasi.
Mid kamid ah Aqoonyahanada Somaalyed oo ahadlay ayaa waxa uu dowlada ku dhaliilay in ay iska indha tireyso dhiiga ku daadanaya Deefow.
“Gudi ayaa loo saaray dagaalka mudo bil ah waxa ay joogaan hoteelada Xamar dadku beera ma fashaan haraad ayay u dhimanaayaan, maalinta koobaad marka ay shan dhimato maalinta xigta hadii lagu tala gali lahaa dad kale kuma wax yeeloobi lahaayeen Colaada”Ayuu yiri Aqonyahan magaciisa diiday in la xigto.
Geesta kale Aqoonyahanka ayaa ka hadlay Colaada iyana ka taagan gobolka Ahabeelada hoose oo uu ku eedeeyay in dowlada ay indhaha ka daawaneyso.
“Adeer Waxaan kuu sheegayaa kuwaa oo dhan dowladu ma’aragto I laah ayaa kula xisaabtamaya” ayuu yiri Aqoonyahanka.
Tan iyo markii dowlada federaalka ay isku balaarisay deegaano iyo degmooyin ka tirsan dalka ayaa waxaa bilowday dagaal ku saleysan dhanka qabaailka oo mudo sanado ah ay somaaliya ka nasatay.
Dagaalada ka taagan gobolka hiiraan wali wax xal ah lagama gaarin iyadoo kan Shabeelada hoose aysan jirin cid wax iska weydiisa.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsUN: 40,000 oo qof ayaa ka barakacay Gaalkacyo. Qarax lala beegsaday ciidan Ethiopian Ah Magaaalada Beledweeyne .Daawo: Mudaharaad Looga soo horjeedo shirka London.Somali govt. troops capture Afgoye.Boqolaal African ah ooku dhimatay bada Malta